Ukuze efulethini yakho njalo wawufana elimnandi engadini ehlobo, zama ukufaka emaqaqasini emagcekeni nengapheli iphepha izimbali. Daisie lephepha uzonikhumbuza ehlobo kushisa, ukudala isimo romantic ngesikhathi enomoya konyaka. Hlobisa imbali amakhethini ukuhlobisa sezimbali noma wenze amahle mural obondeni.
Daisy iphepha Simple
Inketho yokuqala womshini elula izimbali zasendle ngeke kuthathe isikhathi esiningi sakho. Ukuze usebenze kwanele ukuthatha ishidi plain white paper, ophuzi amakhadibhodi, glue sikelo. Okokuqala yenza cores of workpiece. Ngenxa yalesi amakhadibhodi uthathe ezimbili ezifanayo umbuthano ububanzi 5-10 ngamasentimitha. Badlule ekukhiqizeni amapheshana. Ngenxa yalesi iphepha elimhlophe kufanele sibe yimichilo alinganayo. Ububanzi yabo okufanele zilingane ububanzi Daisy amacembe zangesikhathi esizayo, njengokuthi ngamasentimitha amabili. Ubude strip ngamunye kabili ubude amacembe, isibonelo, 30 amasentimitha. Inani bands uzobe ilingane nesibalo amacembe yakho. Engingakusho nje 12 amacembe. Manje yakha ihlumela, alo ishidi ngamunye uhhafu, ngaphandle bushelelezi leli phephandaba. Namatsisela phansi zabo, bese banamathela omunye imibuthano. Uma konke amacembe akhona, ukuvala umbuthano amacembe isizinda sesibili, kokulilungisa nge glue.
iphepha Daisy Complex
Ukuze womshini yezandla ngale ndlela kuzodingeka ukukhalipha, ukubekezela kanye namathuluzi ezikhethekile. Sidinga ukuthola ezimhlophe iphepha, orange, imibala nephuzi, sikelo, lokuvungula, umbusi, usungulo, zokubhala ummese kanye ne-glue. Okokuqala, ukwenza izikhala ngoba ihlumela. Ukuze wenze lokhu, usike umbuthano iphepha elimhlophe ukuthi bayalingana usayizi ukuze ububanzi chamomile. Ngemva kwalokho, yenza umbuthano embobeni maphakathi nendawo, hhayi iphepha dorezaya ukuze uqede. Ngokulandelayo, ukusika ngokucophelela emaphethelweni iphepha nge sikelo, ukudala ukuma isigcebe sembali ngamunye. Khona-ke sebenzisa igama ngalinye lokuthunga lepestochek imizuliswano, ephakamisa onqenqemeni. Iphepha esikhungweni phakathi idatha zokukhwabanisa, zama ukuba angamthinti. Ukuze wenze lokhu, ubambe phansi isithupha. Daisie lephepha etholakala Bole aluhlaza, uma wenza ezimbili zamatshe amacembe ngokubeka kumbuthano owodwa kuya kwenye. Okulandelayo kuba ukuqala ukukhiqizwa cores esihle. Kwenze ngezindlela ezimbili. A samuntu kuqala kuhilela ukusetshenziswa okufanayo cores we preforms, njengoba i-amacembe, ezincane kuphela, kusukela ophuzi iphepha. Songa nabo isigamu kanye nenduku umbuthano maphakathi. Eyesibili indlela ihilela ukunyathelisa cores amahle Lihle ka. Ukuze usebenze udinga ukuthatha isiqeshana of yellow iphepha, sinqume umphetho esihle nesilonda emhlabeni uthi lokuvungula. Khona-ke ukususa, odlulela workpiece phakathi wasinikeza ukuma Isigaxa. Manje cores ingcina yama-a uDaisy, fluffed esiphongweni. Nobhasikidi daisy ingasetshenziswa njengoba original ukubhaliswa odongeni panel noma yokukhiqiza amakhadi. Ingabe ufuna ifomu okuxekethile umbala ebhokisini, bese uwasebenzisa ukuhlobisa efulethini yakho. Uma ufuna ukwenza ngobuningi Ukwakheka ke ulinamathisela kumila wire imbali, bopha phansi iphepha lakhe amahle aluhlaza futhi unamathisele amahlamvu. Zonke kweqembu iphepha ngomumo.
Uthunge Cross Wabasaqalayo on the Umdwebo esiphelele. imifekethiso Imibono
Dry felting amathoyizi. Amathoyizi ubhuquze ezomile: isigaba master Wabasaqalayo
Ukusetha i-satellite izitsha ngaphandle kosizo
Swimsuit tho - isibonelo sokuba bonke
Catherine Gorokhovskaya: Biography nemisebenzi
Umphakathi Post-zezimboni - ukuthi kuyini nokuthi kuzibonakalisa?